The Ab Presents Nepal » शान्तिश्री परियार र अन्जली अधिकारीको तीज गीतमा ठुम्का !
शान्तिश्री परियार र अन्जली अधिकारीको तीज गीतमा ठुम्का !
काठमाडौं -: यो वर्षको सर्वाधिक रुचाइएको लोक दोहोरि गित गलबन्दीले सोसल मिडिया लाई मज्जाले नै तत्तायो । गलबन्दी गितले सकारात्मक प्रतिक्रिया संगै नकारात्मक प्रतिक्रिया पनि बटुल्न सफल भयो’ ।
शम्भु राईको गित बाट प्रभावित भएको आरोप लाए संगै यस गितका गायक प्रकाश सपुतले सयौ थरिका खुड्किलाहरु पार गर्नपर्यो र अन्त्यमा प्रकाशले गालि गर्ने लाई पनि गलबन्दी गित’ बाट मायाले नै जिते र अहिले सबै विवादहरु टुङ्गिएको छ । यहि गितका दुई मुख्य खम्बाहरु गायिका शान्तिश्री परियार र मोडल अन्जली अधिकारीले नकारात्मक प्रतिक्रियाले गर्दा पाएको सास्तीको पिडा पोखेका छन् ।
शान्तिश्री परियारको नया’ गितको शुटिङ्गको क्रममा अन्जली र शान्तिश्री लाई भेट्दा गलबन्दी गितको सफलता र यस पछाडिका पिडाहरुको बारेमा तितो मिठो कथाहरु सुनाए । गलबन्दी गितले गर्दा चुलिएको सफलताले खुशी छन् यी दुवै तर अन्जली भने नकारात्मक प्रतिक्रियाले गर्दा आफुलाई दुख लागेको कुरा व्यक्त गरिन । क्यानाडा नेपालका लागि पुजा श्रेष्ठ संग कुराकानी गर्दै अन्जलीले भनिन: “भिडियोमा आएको नकारात्मक कमेन्टहरु देख्दा कहिले काही सबै छोडेर घर फर्किउ जस्तो हुन्छ’ ।
मलाइ र मेरो काम लाइ गालि गरे पनि सहन्थे तर मेरो परिवार लाई गालि गर्दा चित्त दुखेको छ र यस्तो हुदा काम गर्ने जोस जागर पनि हराउने गर्छ । यस्तो नगर्न दर्शकहरु लाइ म अनुरोध गर्दछु बरु मेरो काममा कमी भए औलाउनुस म सुधार्छु तर पारिवारिक तिर गालि अपशब्द प्रयोग नगर्नुहोला ।